Wadajir iyo Xamar Wayne oo usoo baxay wareegga Rubuc-dhamaadka tartanka kubadda cagta degmooyinka+Sawirro
Friday, April 19th, 2019 - 14:19:16
Saturday September 08, 2018 - 11:15:53 in Wararka by Hussein Hadafow
Degmooyinka Wadajir iyo Xamar wayne ayaakusoo biiray liiska degmooyinka usoo gudbay wareegga rubuc-dhamaadka tartanka kubadda cagta degmooyinka Gobolka Banaadir 2018.
Wadajir ayaa 4-1 uga adkaatay Heliwaa oo ay kulan ciyaareed xiiso lahaa ku yeesheen garoonka Jaamacadaha, waxaanagoolasha laba kamid ah u saxiixay laacibka No-10 Cabdalla Kuukaay Cal, halka ay goolasha kale u saxiixeen Ayuub Axmed Aadan iyo Cusmaan Cabdiqani Basto oo rigooro kusoo qatimay. Goolka qura ee Heliwaa waxaa u saxiixay Ceyduruus Cabdullaahi Yuusuf.
Dhanka kale degmada Cabdi-casiis ayaa 1-0 uga adkaatay Xamar Wayneoo ay kulan adag ku qaateen garoonka Banaadir.
Group D waxaa kaalinta koowaad uga soo baxay Wadajir oo 7 dhibcood keensatay,iyo Xamar Wayne oo 4 dhibcooduruursatay, waxaana tartanka isaga haray Heliwaa iyo Cabdi-casiis oo min 3 dhibcood keensaday.
Degmooyinkan ayaa ku biiraya , Wabaeri, Boondheere, Howl-wadaag, Shibis iyo Hodon, waxaa maanta booska dhiman soo buuxin doonta degmooyinka Shangaani iyo Kaxda midkood oo ku ballansan garoonka Jamaacadaha.
Kaxda ayaa 3 dhibcood oo ay ku heshayganaaxii tartanka looga saarayDharkenley sidata , halka Shangaani ay 5 dhibcood leedahay waxayna kaxda kusoo baxdaa kaliya guul, halka Shangaani iyo guul iyo barbaraba kusoo gudbi karto.
Labada koox ayaa galabta ku ballansan garoonka Banaadir saacadda3:30 galabnimo
Waaxda warfaafinta Xafiiska isboortiga Gobolka